जनताकाे स्वास्थ्यभन्दा कुर्सी ठुलाे हाे ? - DURBAR TIMES
HomeHealthजनताकाे स्वास्थ्यभन्दा कुर्सी ठुलाे हाे ?
जनताकाे स्वास्थ्यभन्दा कुर्सी ठुलाे हाे ?
विश्वकाे तेश्राे ध्रुवकाे देश नेपाल । हिमालयकाे देश नेपाल । हरियाली देश नेपाल । हरियाे वन नेपालकाे धन । यति सुन्दर र मनाेरम पङ्क्तिहरू विद्यालय विश्वविद्यालयहरूमा पढाइन्छ ।
नेपालकाे कुल क्षेत्रफलकाे करिब ४४ प्रतिशत क्षेत्र वनजंगलले ढाकेकाे छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज , वन्यजन्तु आरक्ष लगायतका संरक्षित क्षेत्रहरू छन् । विश्व सम्पदा सूचीमा समावेश भएका प्राकृतिक क्षेत्रहरूसमेत छन् । प्रकृतिकाे अनुपम उपहारकाे रूपमा अनुसन्धाता तथा विभिन्न लेखकहरूलेसमेत व्याख्या गर्ने गरेका छन् ।
तराइकाे फाँटदेखि हिमालका चुचुराहरूसम्म विभिन्न थरीका बाेटबिरूवाहरू पाइन्छन् । विश्वमा हरित गृह ग्याँस उत्सर्जनमा नेपालकाे हिस्सा ०.०२५ प्रतिशत रहेकाे छ । यस्ताे हरियाली , सुन्दर र शान्त देश अहिले विश्वकै प्रदुषितमध्येमा गनिन्छ ।
नेपालकाे राजधानी , मन्दिरैमन्दिरकाे शहर विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत ७ वटा क्षेत्रहरू विभिन्न प्राकृतिक , धार्मिक , साँस्कृतिक र ऐतिहासिक महत्व बाेकेकाे काठमाडाैँ उपत्यका विश्वकै नम्बर एक प्रदुषित शहर बन्न पुगेकाे छ ।
आजभन्दा ३० , ४० वर्षअघिकाे काठमाडाैँ उपत्यका र अहिलेकाे उपत्यकाकाे तुलना गर्ने हाेभने स्वर्गबाट नर्क बन्दै गैरहेकाे अनुभूति हुन्छ । तीब्र जनसंख्या बृद्धि , अव्यवस्थित शहरीकरण , अवैज्ञानिक राजनीतिक प्रणाली र जनचेतनाकाे कमी र पालनाकाे कमीले आज काठमाडाैँ उपत्यका विश्वकै प्रदुषित शहर बन्न पुगेकाे हाेभन्दा कुनै आपत्ति हुँदैन ।
वि.सं. २०६८ सालकाे जनगणना अनुसार नेपालमा सहरी क्षेत्रमा बसाेबास गर्ने जनसंख्या ३८.२६ प्रतिशत रहेकाे छ । त्यसमध्ये काठमाडाैँ उपत्यकामा मात्र २० लाखभन्दा बढी मानिसहरू औपचारिक रूपमा बसाेबास गर्दछन् । काठमाडाैँ उपत्यका पर्यटकहरूकाे राेजाइकाे स्थान हाे । यहाँ पर्यटकहरू लाेभ्याउने विभिन्न स्थानहरूसमेत रहेका छन् । धार्मिक , साँस्कृतिक र पर्यटकीय दृष्टिकाेणबाट समेत महत्वपूर्ण मानिएकाे काठमाडाैँ उपत्यका विश्वकै सबैभन्दा धेरै प्रदुषण भएकाे शहर बन्दासमेत राज्य र सराेकारवाला निकायले केही उल्लेख्य कदम चालेकाे देखिँदैन ।
काठमाडाैँ उपत्यकाकाे काखमा बसेर नै देशले धेरै परिवर्तनहरू आत्मसात गरिसक्याे । २००७ सालकाे क्रान्ति , ४६ सालकाे जनआन्दाेलन साथै २०६२/६३सालकाे जनआन्दाेलनसमेत काठमाडाैँलाई केन्द्रमा राखेर सम्पन्न भएका हुन् । राजधानीले देशलाई यत्रा परिवर्तन दिइसक्दासम्म परिवर्तन बाेक्नेहरूले उपत्यकालाइ प्रदुषणभन्दा केही दिएकाे देखिँदैन ।
उपत्यकाका तीन ठाउँ भादगाउँ , पाटन र किर्तिपुर इतिहासदेखि नै प्रसिद्ध छन् । तिनका अलावा स्वयम्भु , पशुपति, जामे मस्जिदलगायतका धार्मिक स्थलहरूसमेत इतिहासदेखि नै प्रसिद्ध स्थल हुन्। पर्यटकीय गतिविधिका कारण यिनीहरूले समग्र देशकै इज्जतसमेत काँधमा बाेकेका छन् । तर, यीनै स्थलहरू दर्शन गर्न आउनेहरुलाई वायुमण्डलमा रूमल्लिरहेकाे धुवाँले जिस्क्याइरहेकाे छ अहिले ।
वातावरण प्रदुषण भएकाे भन्दै केहिदिन अघि सरकारले शिक्षण संस्थाहरू बन्द गर्ने निर्णय गर्याे । तर विद्यालयहरू बन्द भएकाे बेलामा सरकारले प्रदुषण नियन्त्रण गर्न केही कसरत गरेन । उल्टै सरकारका मन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्म विभिन्न शिलान्यास र उद्घाटनमा व्यस्त भइरहे । विपक्षीसँग आराेप र प्रत्याराेप गरिरहे । प्रदुषणले उनीहरूलाइ केही असर नगरेजस्ताे गरी मस्त राजनीतिमा रमाइरहे ।
जनताकाे स्वास्थ र शिक्षाकाे ग्यारेन्टी गर्दै राजनीति गरेकाहरू कुर्सी नै प्याराे भएजसरी कुर्सीभन्दा अरू कुराकाे भाषणसमेत गर्न भ्याउँदैनन् ।
सत्ताभन्दा बाहिर रहेका अरू राजनीतिकर्मीहरू पनि याे महामारीकाे विषयलाई उठाउन तत्पर भएका छैनन् । आफ्नाे कुर्सि हल्लिँदा देश नै तताउने नेताहरू यतिबेला भने माैन देखिन्छन् ।
देशभरका ७३ भन्दा बढी जिल्लामा लागेका आगाेले धेरे जनधनकाे क्षति भइसकेकाे छ । धेरै जङ्गल डडिसकेकाे छ । त्यैपनि सरकार आगाे निभाउन कहिँ कतै हिँडेकाे देखिँदैन ।
अहिले काठमाडाैँ उपत्यका लगायत देशैभरकाे माैसम निकै धुमिल छ । राम्राेसँग घाम लागेकाे छैन । सर्वसाधारणहरू धुवाँले आँखा पाेल्याे , घाँटी दुख्याे भन्दै अस्पताल गैरहेका छन् ।
यस्ताे बेलामा पनि सरकार र अन्य राजनीतिक दलहरू जनताकाे स्वास्थ्यका बारे नसाेचि कुर्सीकै पछि दाैडिरहन्छन् भने तिनीहरूलाइ भाेट हालेर किन दुःख गर्नु ? जनताभन्दा कुर्सी ठुलाे ठान्नेहरूलाइ किन भाेट दिनु ?
Previous articleओलीले देलान् त राजीनामा ? कतातिर छ ध्यान ?
Next articleकहिलेसम्म रहन्छ वायु प्रदुषण ? के भन्छन् विज्ञहरू ?